Ethiopian Airlines: Sida ugu fudud ee aad ku tagi karto Hargeysa iyo Muqdisho - NorSom News
Ethiopian Airlines: Sida ugu fudud ee aad ku tagi karto Hargeysa iyo Muqdisho
Waxaa soo dhow xiliga fasaxa, oo dad badan, gaar ahaan qoysaska heysta caruurta ay u baxaan safaro dalxiis ama dal booqasho ah. Xiligan oo kale waxaa lagu tartamaa suuqa duulimaadyada, iyada oo tigadadu ay kor u kacaan qiimo ahaan.
Dadka raba inay u safraan ama soo booqdaan dhulkii hooyo, diyaarada Ethiopian Airlines oo isbuucii lix duulimaad ka baxda magaalada Oslo, waxeyna toos isbuucii lix mar u tagaan magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
Tigidada duulimaadyada Ethiopian Airlines ee aada Muqdisho iyo Hargeysa, ayaa qiimo ahaan ka raqiisan kuwa diyaaradaha kale, waxaana intaas dheer in xamuulka uu qofka qaatan karo uu labo jibaar ka badanyahay kuwa diyaaradaha kale.
Qofkii raba inuu kusii nasto magaalada Adiss ababa, ama qataabo halkaas ka degan sii booqdo, waxey diyaaradu siineysaa fursad tigid badalasho, labada dhinacba.
Wixii faah-faahin ah kala xiriir: 22 06 44 01
Ama booqdo xafiiska diyaarada ee Oslo, Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo
Previous articleNorway: Xaakim hore oo lasoo taagay maxkamad, isaga oo ku eedeysan faro-xumeyn caruur.
Next articleDaraasad: 39% Norwiijigu, waxey aaminsanyihiin in soomaalidu aysan Norwiiji noqon karin.